Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in Aag dagaallada ka caaggan ay ka hirgelinayso waqooyiga wadanka Suuriya.
Friday January 27, 2017 - 18:23:02 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiyaha cusub ee dowlada Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay qaabka uu maamulkiisu u wajahayo dagaalka lix sana jirsaday ee ka socda wadanka Suuriya.
Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in mandiqad aamin ah ay ka dhisi doonto waqooyiga wadanka Suuriya taasi oo macnaheedu tahay in maamullo dabadhilif ah oo Mareykanka siyaasaddiisa ku shaqeeya ay ka hirgelin doonto wadanka Suuriya.
Donald Trump ayaa shabakadda ABC ee Mareykanka laga leeyahay u sheegay in dhismaha mashruucan uu dhaqan geli doono 90 maalmood gudahood islamarkaana uu u xil saaray wasaaradaha arrimaha difaaca iyo arrimaha dibadda.
Mashruuca ayaa dhigaya in waqooyiga Suuriya lagu fidiyo ciidamo mareykan ah iyo lataliyaal melleteri kuwaasi oo kooxaha kurdiyiinta Malaaxidada ah iyo mucaaradka dhax-dhaxaadka ah kala shaqeyn doono dhismaha maamullo dabadhilifyo ah.
Qorshaha Mareykanku ku dhawaaqay ayaa sidoo kale dhidibada u xaaraya in hawada waqooyiga Suuriya aysan soo geli Karin diyaaradaha dagaalka ee nidaamka Bishaar Al-asad waxaana dhici karta in qorshahan ay kasoo ho rjeesato dowladda Ruushka oo duullaan ku qaaday wadanka suuriya.
Dowladda Nasaarada Mareykanka waxay ku andacootay in hirgelinta mandiqadda aaminka ah ay wax ka tarayso hakinta qulqulka tahriibayaasha reer suuriya ee u firxanaya dhanka wadamada reer galbeedka.
Dublumaasiyiin ku sugan magaalada Washington ayaa sheegaya in tallaabada uu qaaday Trump uu ku doonayo in uu ku wanaajiyo cilaaqaadka kala dhaxeeya xukuumadda Dabadhilifka Turkiga taasi oo sanadadii lasoo dhaafay dadaal ugu jirtay in ‘Mandiqad aamin ka ah dagaallada laga hirgeliyo waqooyiga Suuriya’ balse waxaa diidanaa maamulkii Brack Obama.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa u muuqda in uu shaqadiisa ugu horraysay ka dhigayo hirgelinta balanqaadyadii uu jeediyay ka hor intii uusan doorashooyinka gelin, xilligaasi oo uu yiri " Suuriya waxaan ka dhisaynaa Mandiqad dagaallada ka caaggan, anaga jeebabkeenu waa maranyihiin oo waan daymaysanahay balse Wadamada Khaliijka carabta ayaan ka qaadaynaa lacagta aan ku dhisayno mandiqadda waa in ay bixiyaan lacago qaan sheegad ah”.
Kooxaha mucaaradka Suuriya ee dibad joogga ah ayaa durbadiiba soo dhaweeyay dhawaqa kasoo yeeray Donald Trump oo ay ku tilmaameen mid ogolaanaya hirgelinta mashaariicda Turkiga ee Suuriya.